Iglasi esempilweni yobucala, uMkhuseli wabucala weScreen-OTAO
I-3D epheleleyo yeGlue
Iglu ye-3D Edge
Iglu ye-3D UV
Umda we-3D Resin
Ukukhanya okuLuhlaza okwesibhakabhaka
Funda nzulufumana ixabiso
UKUQALISWA KWENKQUBO ENTSHA
Inkxaso yamandla e-OTAO eyomeleleyo ye-R & D ukuqhubeka nokuqalisa iimveliso ezintsha ukunceda abathengi bethu ukuba bafezekise izabelo zentengiso ezingaphezulu.
I-iPhone 12 uthotho lweCorning Gorilla yeglasi enobushushu ...
Samsung S21 Ultra 3D Hot-ukugoba AKA Screen Pro ...
Imveliso yeglasi enobushushu obumiselweyo
2.5D Anti Blue Ukukhanya Wobulali Glass Screen Prot ...
2.5D High Clear Anti-Uthuli Wobulali Glass Screen ...
2.5D 0.33mm Clear Wobulali Glass for iPhone 12 ...
Samsung S21Ultra 3D Pheleleyo Iglu Wobulali Glass Sc ...
Samsung S21 Plus 2.5D Iglu Full Wobulali Glass ...
I-OTAO ibonelela ngaphezulu ukuqokelela kunye nokwenza ngokwezifiso wabakhuseli bekhusi,
kwaye izisombululo zokhuselo ukufikelela kwiimfuno zabathengi okanye zentengiso
I-3D UV GLUE YOKUGQIBELA IGLASI
IKHRASI YOKUQALA YEKONA
I-2.5D YOKUGQIBELA IGLASI
I-Shenzhen OTAO Technology Co, Ltd. ekhethekileyo ekwenzeni nasekuhambiseni umkhuseli wescreen, sisisombululo esinye sokukhusela isikhuseli kunye nokukhusela isikrini. I-OTAO ibonelela ngezinto ezahlukeneyo zepremiyamu kunye nemisebenzi emininzi yesikhuseli, kwaye uzenzele izixhobo ezahlukeneyo, njengefowuni ephathekayo, iPad, ithebhulethi, ilaptop, iwotshi efanelekileyo, yiya pro, ikhamera, imoto, izixhobo zasekhaya kunye noomatshini njl.
Njengomvelisi ophambili kwihlabathi okhusela umkhuseli kolu shishino, i-OTAO® iyaqhubeka ukuphuhlisa imveliso entsha, ukuphucula umgangatho wemveliso, ukuphucula iinkonzo zethu kubaxhasi bethu, ukuhambisa amaqabane kunye nabarhwebi bohlobo.
"Ukunceda abathengi bethu ukuba bakhule kakuhle kwaye bomelele" yeyona ngcinga yethu iphambili yeenkonzo
-Umnu Andy Huang, Mongameli we-OTAO,
Iqela lakho le-R & D / elebhu yangaphakathi kunye nezixhobo zokugcina ukubonelela ngezisombululo ezitsha kunye neziphambili.
Khawuleza upapashe iimodeli ezintsha kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo kunye neemeko zentengiso kunye nezixhobo ezitsha.
Uvavanyo olupheleleyo lwe-100%, kunye nenkqubo ye-TQM epheleleyo yokuqinisekisa umgangatho wenkqubo nganye
Elungiselelweyo ubungakanani ezahlukeneyo okanye izinto kwiimfuno zabaxhasi kwizixhobo nohlahlo-lwabiwo mali.
Izinto zeBrand ze-OEM
Amazwe kunye nendawo
Amagama okwenyani avela kubaxhasi bethu beVIP
Sisebenze kunye malunga neminyaka esi-7 kunye neqela le-OTAO, enkosi ngokusebenza nzima kunye nenkxaso, kwaye uhlala usinika izinto ezintsha kunye neemveliso ezisemgangathweni. Bayilandelela ngononophelo iiodolo zethu de sathengisela abathengi bethu. Umkhuseli wesikrini se-OTAO uthengiswa kakuhle elizweni lam, kwaye usizisela ishishini elingaphezulu kuthi .....
Sifumene izimvo ezilungileyo ezivela kubaxhasi bethu. Yinto entlel. Ndonwabe kakhulu ukufumana iglasi enomsindo kuwe ngqo. Baya kuyandisa ngokukhawuleza kuzo zonke iivenkile zabo kwaye banxibe iivenkile zabo ezikwi-Intanethi. Siyayixabisa intengiso OTAO zisinika iingcebiso ngokunyanisekileyo kunye nengcebiso phambi kokuba sibeke iodolo ngalo lonke ixesha ...
Sikubonile ukukhula kunye nokukhula kwe-OTAO, kunye neemveliso ezingakumbi kunye nomgangatho olungileyo. Njengomnini webhrendi, kufuneka sinikezele abathengi ngemveliso esemgangathweni kunye nexabiso elifanelekileyo. I-OTAO ibisoloko isinika inkxaso. Siqinisekile kuyo kwaye sikhangela intsebenziswano engakumbi ...
Isikhuseli seglasi esikwi-iPhone 13 esikhuselekileyo saziswa ngo-Epreli
Umkhuseli wesikrini uyanceda wena !!!
IsiTshayina unyaka omtsha weholide kunye nolungiselelo lokukhusela isikhuseli
Iqela le-OTAO lowama-2020 ebibanjwe nge-20 kaJanuwari
Sibonelela ngenkonzo yeeyure ezingama-24, nceda unxibelelane nathi ngqo!BUZA NGOKU
3 / F, Bldg B, iZhashi Industrial Park, # 16 Lixin Road, Danzhutou Nanwan, Isithili saseLonggang, kwisiXeko saseShenzhen, China